SIDEE SI HABBOON U DABOOLAN KARTAA WARAAQDA DERBIGA EE DERBIYADA, SAQAFKA, GEESAHA, SALDHIGGA AAN LA TAABAN KARIN, OO LEH SAWIR, GACMAHAAGA - SAMEE NAFTAADA
Wargeysyada - dusha sare ee loogu talagalay derbiyada iyo saqafka. Qiimaha yaryar, xulashada ballaaran ee midabada, qalajinta degdegga ah iyo ammaanka ayaa go'aamiya baahida sare ee iyaga. Su'aalaha kelida ah waa habka dhejinta. Sida loo sameeyo si sax ah - waxaan ka hadli doonaa arrintan.
Waxa ugu horreeya ee la bilaabayo waa diyaarinta derbiyada. Waxay u baahan yihiin in la nadiifiyo daaha hore, hadday lagama maarmaan tahay, heerka iyo ra'yiga.
Nadiifinta derbiyada ka soo duubista hore
Si aad ugu dhejiso joornaalo cusub oo rinjiga ka baxsan ama sawiradii hore ee sawirada ma aha fikrad wanaagsan. Rinjiga wuxuu ka dhigayaa muuqaalka dusha sare iyo liidashada. Xayawaanka qadiimka ah wuxuu iska furi karaa inuu qoyaan ama miisaanka lakabyo cusub. Sidaa daraadeed, aan bilowno adoo ka jaraya daboolka hore.
Talaabadani waxay dhacdaa marka la eego dhacdadan soo socda:
korontada ku shub guriga;
adigoo isticmaalaya maro / spray / maro qoyan oo qoyan waxaan ku qoyay daaha hore;
baxo 10-15 daqiiqo si aad uhesho qubeys;
Isticmaal aaladda "spatula", si tartiib ah uga dhaji inta haray ee dusha.
Haddii loo baahdo, ku celi tallaabooyinka 2-4 ilaa derbiyada si buuxda loo nadiifiyo. Si aad u adag ayey u adag tahay in la nadiifiyo derbiyada, haddii ay hore u rinjireen.
Xaaladdan, waxaad isticmaali kartaa hababka noocaas ah:
Qalabaynta timaha. Markaa, rinjiga waa uu kululaa, jilicsan yahay, waxaana la saaraa spatula. Habkani waa mid halis ah iyada oo aan loo diyaarin haboon - waa lagama maarmaan in la abaabulo hawo wanaagsan;
Booqday. Iyada oo gacan ka heleysa heesaha, darbiga ayaa loola jeedaa lakabka jirkana waa la jarjaray. Tani waa hab boodh ah, sidaa daraadeed waxaad u baahan tahay inaad daaqadaha furto, daboolo dabaqa iyo alaabta guriga oo leh filim iyo mashiinka dildilaaca si aysan boodhku u helin;
maydhin. Habka ugu sahlan waa in lagu daaweeyo dhammaan farsamo gaar ah oo si waxtar leh uga saara rinjiga hore. Waa in la xusuustaa in shaqooyinkaas ay ka mid yihiin cabitaano noocan oo kale ah lagu fulinayo qalab ilaalin shakhsiyeed iyo daaqado furan.
Waxaan kugula talineynaa inaad ka akhrido sida rinjiga hore looga soo saaro derbiyada.
Sidaas daraadeed darbiyadu waxay noogu muuqdeen qaabkoodii hore. Laakiin waxay noqon karaan kuwo aan sinnayn ama, inta lagu jiro nidaamka nadiifinta, waxay samayn karaan jajabyo iyo xajmiga dusha sare. Xaaladdan oo kale, waa in ay noqotaa mid heer sare ah.
Burinjinta waxaa lagu sameeyaa isku dhafan gaar ah iyadoo la isticmaalayo malaayiin kala duwan.
la marsiiyo qalajiyaha maydka;
baaldi isku dhafan;
Qaar ka mid ah gawaarida (ka yaryar ilaa aad u ballaaran);
Iyadoo ku xiran xaaladda darbiyada, mashiinka waxaa lagu daboolaa dhowr lakab - hal koowaad iyo mid dhammeystiran. Putty ayaa lagu dari karaa isku xirka derbiyada.
Waxay noqon doontaa mid waxtar kuu leh si aad u akhrido sida loo xakameeyo xayndaabka daaqadaha xilliga jiilaalka adoo isticmaalaya gacmahaaga.
Nasiib darro, derbiyadii guryaha waayeelka ah, gaar ahaan kuwa lagu dhisay USSR, ayaa had iyo jeer aan sinnayn. Iyo inta badan isdaba-marinta ka soo jeedda waa mid aad u muhiim ah.
Wixii darbiyadan oo kale waxay u baahanyihiin inay isku xiraan. Si kasta oo aad u adag tahay inaad isku daydo inaad dhuumato oo aad qariso qaladaadkaan, ma shaqeyn doonto. Dhamaan xayawaankaas, niyadjabyada iyo meelaha yaryar ayaa weli muuqan doona. Isku xidhka qulqulada yaryar waxay ku dhacaan macmacaan.
Haddii kala-soociddu ay aad u daran tahay oo la dareemi karo, waxaa fiican in la isticmaalo qalajiyaha ama xumbo khaas ah. Hab kale oo khatar ah waa qalabka mashiinka. Waxay ku lug leedahay dhamaystirka dhammaan lakabka malabka iyo nadiifinta tuubooyinka. Tani waa wakhti dheeraad ah oo qadarin leh oo soconaya.
Darbiyada dhoobada ah
Derbiyada hoose waa in lagu sameeyaa laba marxaladood.
Midka koowaad waa in asal gaar ah loo isticmaalo kahor intaan la cunin si looga hortago horumarinta fangaska iyo qoyaanka.
Midda labaad - kaliya ka hor shaqo. Waxaa loo isticmaali karaa qalabka dhegeysiga gogosha leh oo biyo lagu qasi karo, ama walxo gaar ah.
Hadda waxaad bilaabi kartaa nidaamka. Laakiin marka hore waxaan soo saarnaa koolada.
Xulashada koolada gidaarka
Dukaamada casriga ah, doorashada koollada ayaa aad u kala duwan. Tani ma ahan wax la yaab leh, iyada oo la tixgelinayo in nooc kasta oo ka mid ah waraaqaha sawirku uu u baahan yahay koolo gaar ah.
Nalalka iyo xaashida xaashida CMC (oo ku saleysan carboxymethylcellulose) - kani waa qiimo jaban, waxaa jira dukaam kasta oo aad u fiicnaanaya in la xajiyo. On sale waxaa jira noocyada sida Axton, Quelyd, PVA.
Qalabka sawirka culus (vinyl ama jute), xabagta vinyl leh kuwa fungicide wax ku habboon. Waxaa lagu sameeyaa iyada oo lagu saleynayo istaarijin, methylcellulose iyo waxyaabo kala duwan oo lagu daro (fungicides, calaamadaha), ma aha oo kaliya miisaanka culeyska, laakiin sidoo kale ilaaliya derbiyada ka sameysan caaryada iyo fungi.
Markaad dooranaysid, fiiro gaar ahow magacan soo socda: Quelyd VINIL SPECIAL, Metylan Vinyl, KLEO Smart Vinil Line Premium. Xirmooyinka aan xirneyn, dooro nadiifin wanaagsan oo leh waxyaabo ka hortag ah. Methylcellulose iyo starch waxay sidoo kale saldhig u ah koollada. Tusaale ahaan, KLEO dheeraad ah ee Khadka Dabiiciga ah ee Flizelinovy, Metylan Flizelin Premium, Moment Flizelin. Waxaa sidoo kale jira halbeeg oo guud oo ku habboon saldhig kasta. Kaliya lakabka ayaa ka duwanaan doona - cufnaanta waraaqda derbiga, waa ka sii dhumucdeedu waa inay ahaato. Universal waxay tixgelisaa Bustilat, Moment-Classic.
Kumbuyuutar kasta oo kobcin ah (KLEO, Moment, Metylan, Quelyd) wuxuu leeyahay khadad u gaar ah nooc kasta oo dabacsan. Waxaa badanaa loo yaqaan "Vinyl", "Fiberglass", "Flizelin".
Waxa kale oo aad diyaarin kartaa dhogortaada fudud ee aad u taagi kartid warqadda ugu caansan. Waxaad u baahan doontaa 200 garaam oo bur ah (oo doorbidayaa heer hoose) iyo 1 litir oo biyo ah.
Ka dibna sii wado sida soo socota:
Ku shub dhammaan burka suunka diyaarka ah iyo ku dar 200 g oo biyo ah. Waa inay ku shubaan biyaha burka, oo aan aheyn kuwa kale.
Iska ilaali maaddooyinka ilaa inta la siman yahay.
Ku shub biyo ku hartay (800 g) bukaanka iyo meel karinta dabka.
Ka dib markii la kariyo, si tartiib ah iyo si tartiib ah ku shub isku dar ah bur iyo biyo biyo karkaraya, kareyso joogto ah.
Keen wax kasta karkari iyo ka qaad kuleylka.
Ka dib markii la qaboojiyo, dhoobada ayaa diyaar u ah isticmaalka.
Marka aad iibsaneysid dabaysha, waa inaad sidoo kale doorataa inta u dhaxaysa qalabka nadiifka ah iyo kuwa diyaarka ah. Isku darida qallalan ayaa ah kuwa ugu baahsan. Waxaa lagu qasi karaa biyo, si fudud oo loo kaydiyo, iftiin miisaanka.
Halabuurka la dhammeeyey waxaa lagula talin karaa bilowga iyo bilawga aagga daaqa yar. Warshaduhu waxay sidoo kale soo saaraan sharrax leh tilmaam (buluug ama casaan) - taasi waxay kuu ogolaanaysaa inaad si cad u aragtid meesha lagu dabaqayo.
Waa muhiim! Markaad dooranayso adigoon, fiiri heerka pH. PH sare (10 ama ka badan) kuma tagi doono lafaha jaalaha ah marka qalajinta iyo ku haboonaanta waraaqaha nalalka fudud.
Sidaas awgeed, koolada ayaa go'aamisay, waa wakhti aad ku shaqeyso.
Noocyada habka is-qabsiga
Nooc kasta oo daboolid ah waxay u baahan tahay xaalado gaar ah iyo habab loo xiro. Sidaa darteed, waa inaad ogaatid sida loo xareeyo kuwan ama waraaqaha kale.
Waraaqaha waraaqaha warqadda
Aragtida ugu caansan, raqiis ah iyo sahlan. Iyaga oo dhan, waxaad dooran kartaa jilib kasta, xitaa macmacaanka guriga laga sameeyo bur iyo biyo.
Waxaa laga yaabaa inaad xiiso u leedahay akhrinta sida loo doorto sheyga.
Nidaamku waa sida soo socota:
jarida. Marka hore, duubka ayaa la jarjarey oo jarjaraa dhererka loo baahan yahay + 10 cm Haddii ay jirto qaab, waa in la xushaa - duubka, masaafada u dhexaysa qaabka soo noqnoqda ayaa lagu tilmaamaa. On wallpaper sida waxaa jira gees ah leh hal ama laba dhinac. Marka laysku daro wadajirka, lugtiisa waa in laga saaraa, haddii la isku dhejiyo iskudhaf, ma aha mid lagama maarmaan in la gooyo;
calaamadaha derbiga. Natiijada ugu fiican, waxaad u baahan tahay inaad calaamadiso darbiyada adoo ku dhejisanaya lakabka. Tani waxaa ugu wanaagsan in la sameeyo iyadoo la isticmaalayo heer (ama tuubbo) iyo feeraha. Waxa kale oo aad isticmaali kartaa ciriiriga jilicsan ee jilicsan - waxaad u baahan tahay inaad jiido oo aad sii deyso;
gelinta xabagta. Dhuxulku si taxadar leh ayaa loo adeegsadaa cirbadaha la dhammeeyey, faafinta si siman oo siman dusha oo dhan, gaar ahaan feejignaanta geesaha. Ka dib markaa, warqadda waxaa la geliyaa gudaha gudaha 5 daqiiqo si weyn loo dhigo.
Waa muhiim! Waqtiga cirridka waa in uu isku mid yahay dhammaan qaybaha. Haddii kale waxaa jiri kara goobooyin iyo waxyaabo aan waxyeello lahayn.
xabagta Waxaan bilaabi karnaa daaqada daaqadda, qolka, ka iftiinka. Waxaanu kormeertaa xitaa xakamaynta saxda ah iyo cadaynta qaabka. Waxaan ka qaadannaa gunooyinka dhulka iyo saqafka. Qalabka waxaa lagu cadaadiyaa oo la mariyaa maro qallalan. Qalabka loo baahan yahay ayaa loo baahan yahay in lagu daaweeyo qalajiyaha xargaha - sidaas awgeed ma arki doonaan.
Hoos waxaa ku qoran faahfaahin faahfaahsan.
Remnants of wallpaper on saqafka iyo baseboard waxaa lagu riixay mindi derbiga. Uma baahnid inaad ku dhameysato albaabka korkiisa.
Waraaqda darbiga ah ee aan xirneyn
Si aad u bilawdid, derbi ayaa lagu dhejiyaa sida dusha sare. Iyada oo kaalmada heerka ama raadiyeyaashu sameeyaan calaamado toosan oo leh 1m.
Iminka diyaariya diyaarinta waraaqaha. Rolls ayaa la jarjaray oo la jaray. Waa in la gooyaa iyadoo tixgelinaysa muuqaalada sawirka, iyagoo dooranaya haddii loo baahdo. Iska yaree hal dhinac. Waxaa ugu wanaagsan in la gooyo isla markiiba qolka oo idil.
Bacaha daboolka ah ee saldhigga aan la saarin waxay u baahan yihiin koolo gaar ah oo ku habboon iyaga, ama ka dib talooyinka daba-dhaliyaha. U diyaari koollo sida ku qoran tilmaamaha sanduuqa. Ka hor intaanad bilaabin shaqada, akhri talooyinka soo-saaraha. Waxaa jira macluumaad faa'iido leh oo ku saabsan waxqabadka shaqada.
Cuntada waxaa lagu dabaqaa oo keliya darbiyada, dharka laftiisa waxaa lagu daboolaa xaalado dhif ah. Si taxadar leh u dabool, adigoo aan kala tagin, iyo waxoogaa ka badan oo ah ballaadhka ballaaran ee duubista. Inta lagu jiro shaqada isticmaalka qalajiyaha - sidaas awgeed ayaa xabagta si siman loola dhaqmaa.
Ka dib markaad dalbato dabacsanaanta, qoryaha diyaarka ah ayaa lagu dabaqayaa derbiga oo heerkulku yahay, oo ka bilaabmaya xagga sare. Tan waxaa lagu sameyn karaa rooge ama maro qalalan. Maadada xad-dhaafka ah waxaa lagu tirtiraa dhinaca qaybta loo yaqaan 'pasturized'.
Ku riix xag waraaqda ah derbiga adoo isticmaalaya daawada qalooca oo jarjartey mindi - sidan ayaan ku heyneynaa xariiq adag. Ka saar sharoobada xad-dhaafka ah ee saqafka iyo lugaha leh maro nadiif ah oo qalalan. Ku celi nidaamka.
Waraaqda derbiga ee Vinyl
Ku dhajinta dukumintigan ma aha wax ka duwan waraaqaha:
waxaan ka dhignaa calaamadaha derbiyada;
waxaan ka dhignaa dhererka dhererka loo baahan yahay (oo lagu daro 10 cm santuuqa);
waxaan ku dhuujineynaa derbiga adigoo ku dhejinaya;
waxaan ku dhejin karnaa waraaqda derbiga, isku laab si aad u barareyso, u dhaaf 5-7 daqiiqo;
xabagta oo laga bilaabo daaqada kor ilaa hoos;
dhajinta cirbadaha, lafdhabarta kala-goysyada iyo ka saarida xabagta xad-dhaafka ah;
gooyso xagga hoose iyo saqafka.
Waa muhiim! Waxaanu heerarka cirridka ku dhajinnaa xargaha xargaha. Haddii aad isticmaashid dhar - waxaa jira fursad aad ku dhaawaceyso lakabka vinyl.
Waraaqda buluuga ah
Waxaa lagu kala soocaa qoto dheer oo qoto dheer, laakiin mabda'a xoqidda waxay la mid tahay caleemaha.
Guud ahaan, taxanaha tallaabooyinka waa caadi:
Diyaarinta koolada (qaadashada midka uu soo jeediyo soo saaraha);
calaamadeynta cirifka dhererka qolka (oo leh kaalmo 10 cm);
waxaan ku faafinaynaa dhuujin diyaarin ah, waxaan isku duubnaa barar;
waxaan ku dhejin karnaa derbiga;
waxaan ku dabooli karnaa darbiga derbiga waana u siman yahay;
saaro koolada xad-dhaafka ah ee rinjiga;
Ku celi tallaabooyinka laynka xiga.
Waa wax aan loo baahnayn in la isticmaalo spatula ama maro si loo kabo - waxay wax kasta u jabi karaan.
Sawirada diimeed waxaa lagu sameeyaa gacanta iyadoo la adeegsanayo agabyo kala duwan oo saldhig u ah. Sida saldhig u ah isticmaalka nadiifinta ama warqadda. Waxay ku daboolan yihiin lowska iyo maadooyinka bamboo, cawska, dhirta kale, caleemaha, cawska, cawska dhagaxyada iyo macdanaha kala duwan. Waxa ugu muhiimsan ee ka muuqda sawiradu waa jawi saaxiibtinimo.
Maaddooyinka dabiiciga ah waxay abuuraan dhibaatooyin gaar ah isticmaalka qalabka derbiga. Iyaga ayaa u isticmaali kareeraha ay soo saaraan soo saaraha, ama koolka loogu talagalay waraaqda derbiga ah. Haddii qalabku aad u culus yahay, markaa waxa fiican in la isticmaalo "ciddiyaha dareeraha".
Dhar gogolka gaaban waa jajab ama maqas loogu talagalay biraha.
Dalbashada shaati ayaa lagu sameeyaa burush, aad u taxadar badan - waa wax aan la aqbali karin oo lagu dhejiyo daboolka dhinaca hore.
Dhuxusha waxaa laga dalbadaa cirbadaha waxayna ku tagtaa qoyaan 5-7 daqiiqo.
Xiddidada calaamadeysan ayaa daboolka ka dhejiya.
Dhaqdhaqaaqa waxaa lagu sameeyaa xargaha xargaha.
Waa muhiim! Noocida noocan oo kale ah lama dhigi karo! Si loo xoqdo geesaha, waxaa fiican in la gooyo ama lagu qurxin karo qurux ku habboon.
Qalabka sawirka duleedyada
Waxay ka samaysan yihiin muraayad waxaana badanaa loogu talagalay rinjiga. Nidaamka lagu dhajiyo waa mid sahlan.
Diyaarso sharoobada ay soo jeediso soo saaraha.
Diyaarso dhererka dhererka loo baahan yahay.
Ku dabool darbiga derbiyada - iyaga ku yaal, ha ku dul qorin waraaqaha!
Ku dhaji cirbadaha si aad uhesho.
Ka dib qalajinta, rinjiga.
U calaamadee jilbaha maro warqad ama saldhig aan lahayn. Nidaamku maaha mid aad u kala duwanaaya noocyada kale:
waxaan ku dhuujineynaa finanka dhirta la dhammeeyey, ka tago saddex daqiiqo;
Waa muhiim! Ha isku duubin jilicsanaanta - tani waxay dhalinaysaa xadhkaha dharka. Sidoo kale suurtagal maaha in laga hortago sharraxa inuu hoos u dhaco dhinaca hore.
haddii sawiradda la sameeyo iyada oo aan saldhig u aheyn, ka dibna waxaan ku dhuujineynaa derbiga leh qalfoofka, maaha xarig;
waxaan ku dabooli karnaa dhuubka derbiga waxayna udhaqaaqi kartaa qulqulka ama raajada;
xadhigga xiga oo leh jajab dib u celi;
waxan ka gooyay waraaqaha sawirada ee ka sarreeya kor iyo hoos;
Qalabka sawirada dhuxusha
Dayntani waa lakabka wareejinta ee loo adeegsado warqad ama isdhexgal.
Marka ay shaqeyneyso waa in ay tixgelisaa daqiiqado sida:
muraayadaha sawiradu ha u dhaafin qoyaanka, sidaa daraadeed derbigu waa inuu nuugo, ama waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho substrate gaar ah;
Ka hor inta aanad bilaabin shaqada, waa lagama maarmaan in si buuxda loo demiyo korantada.
Hawlaha ugu muhiimsan waxaa lagu fuliyaa heerka:
waxaan ka dhignaa dhererka dhererka loo baahan yahay oo lagu daray 10 cm saamiyada;
haddii salka aan la taaban karin - waxaan ku dhuujineynaa derbiga leh qalin;
haddii ay saldhig u tahay warqad - waxaan ku dhuujineynaa qalfoofka, adoo isku laabaya barar, 5-7 daqiiqo;
kaneecada ka bilaw daaqada, kor ilaa hoos;
waxaan jarjarnaa jaranjarada hoose iyo saqafka.
Tani maaha mid muuqaal ah muraayadda dareenka ereyga - waa rujin. Sidaa darteed, looma dhejin karo, derbigana ku dheji xayndaab iyo si siman u xoqan. Marka hore, u diyaar garee xalka adoo isku dhex daadinaya taangiga oo dhan walxaha - marka hore daaqada, ka dibna saldhigga iyo koolada.
Wax kasta oo gacanta ah ku walaaq (isku qasi karee ayuu dhaawici karaa fiilooyinka) isla markaana ka tagi karaa in muddo ah. Isku daridda dhamaystirtay waxaa lagu dabaqayaa derbiga gacmahaaga ama qalabka jirka, ku faafi si taxaddar lehna loola dhaqo balaastig caag ah si loogu dhejiyo dheriga loo baahan yahay iyo midabka lakabka.
Dhulka dusha sare
Farqiga ugu weyn ee ay ku adagtahay in lala shaqeeyo - xulasho taxadar leh oo sawir ah.
Haddii kale, talaabooyinka waa isku mid:
diyaarinta strip - xoqitaanka geesaha, jarida dhererka la rabay;
dhejinta shaatiinka dusha iyo derbiyada. Xannibaadaha ayaa la duubay 5-7 daqiiqo;
Isticmaal faashadda derbiga oo si siman u rogrogi raajo ama qalab, laakiin ma aha dharka ama gacmaha;
xadhigga xiga ayaa lagu dabaqayaa midigta midda la xayiray, ee la duubay, oo si buuxda u dhigma sawirka. Wadajirku si taxadar leh ayaa loo duubay;
iyadoo la raacayo xariijinta isku xirka, jeexitaan ayaa lagu sameeyaa dhererka dhererka. Goobta isku dheji mar labaad ayaa la mariyaa iyadoo la mariyo koollo oo lagu xayeysiisay rooge;
habka loogu talagalay kooxda soo socota ayaa lagu soo celiyaa;
Ka dib marka qolka oo dhan la marsado, waxaa lagama maarmaan ah in lagu dabaqo ka hortagga saameynta taban ee muuqaalka sawiradda. Si arrintan loo sameeyo, waxaad isticmaashaa nadiifiye biyo ah oo ku saleysan acrylic. Waxa kale oo jira ikhtiyaarka ah in lagu dalbado filimka vinyl, laakiin waxaa wanaagsan in lagu xalliyo arrintan mihnadlayaasha.
Tilmaamo Talooyin ah
Sidaa daraadeed, hababka loo qaabeynayo noocyada kala duwan ee waraaqaha muuqaalka ayaa nagu cadeeyay. Hadda waxaan baranaa sida si haboon loo fuliyo habraaca iyo waxyaabaha loo baahan yahay in lagu xisaabtamo shaqada.
Sheyga ugu adag ee ganacsi kasta waa talaabada koowaad. Marka la xoqdo waraaqaha xayawaanka - tani waxa ay la socotaa bogga hore. Si talaabadani u noqoto mid guul leh, waxaa lagama maarmaan ah in lagu dhejiyo, iyada oo la adeegsanayo wax qoto dheer oo saldhig u ah. Sidaa darteed, shaqada waa inay ka bilaabataa daaqada ama albaabka.
Ma jiro farqi gaar ah oo u dhaxeeya ikhtiyaarradan. Laakiin haddii aad isticmaashid warqad dhejis ah iyo koolo ay ka buuxsanto, ka dibna waxaad u baahan tahay inaad ka bilowdid daaqada oo aadna aad uga fogaato iftiinka - tani waxay qarin doontaa seeraha.
Ma taqaanaa? Jaangooyada koowaad ayaa lagu sheegay xeerka Louis XVI ee 1778, taas oo tilmaamtay dhererka loo baahan yahay oo ah 34 cagood (10.4m).
Haddii kale, waxaad ka bilaabi kartaa geeska, laakiin tani waxay la xiriiri doontaa dhibaatooyin gaar ah, maaddaama xaglaha xitaa ay aad u yar yihiin. Sidaa daraadeed, habkani waxaa loo isticmaalaa kiisaska fursadaha kale ay adag tahay in la isticmaalo oo xagal toosan ayaa shaki badan.
Sida loo xiro geesaha, albaabada iyo daaqadaha
Dhibaatooyinka ugu waawayn ayaa soo baxa marka la xoqayo geesaha, daaqadaha iyo albaabada. Looma baahna inaad ku dhejiso dhuuban oo dhan geeska - tani waa mid aan haboonayn, goobooyin iyo labbo ayaa la sameeyaa, kariimadu ma dhegaysan doonto sida ay tahay.
Sidaa darteed, waa inaad horey u sii diyaarisaa hawlahan. Goolasha waa in lagu dhajiyaa macaanka. Xisaabi dhererka dhuuban, kaas oo noqon doona geeska, si aan ugu badnaan 3-4 cm ku habooneyn derbiga xiga.
Xisaabtooyinkan, tixgelin la'aanta xajmiga xaglaha - aadka u xooggan, xannibaadda waa in la sameeyaa. При помощи шпателя или щетки разровняйте и прижмите полосу в углу. Если стали появляться складки - разрежьте их и разровняйте. Теперь переходим на вторую стенку. Надо сделать разметку для полосы на этой стене. Si tan loo sameeyo, qiyaas tallaabada fogaanta xagasha siman ee dhererka dhuuban, laga jaray 5-6 mm, iyo sawir toosan isticmaalaya heerka. Waxaan bilaabeynaa in la yareeyo, diirada saaro linekan, waxayna keenaan geeska. Haddii muraayadda dusha sare ay cufan tahay oo culus tahay, isticmaal barkad tuubbo goosad ah markaad ka samaysanayso geesaha.
Sida loo daboolo saqafka
Nidaamka lagu dhajin karo saqafka maahan mid si gaar ah u adag, oo ku xiran xeerar dhowr ah:
saqafka waa in la diyaariyaa - la nadiifiyo daaha hore, oo leh heer macaan ama qalab diirran, oo la daboolay;
koolada waa in la diyaariyaa dhumuc ka badan derbiyada. Dhaqdhaqaaqa culus, dhumucda dhoobada;
Ka hor intaanad bilaabin, waxaad u baahan tahay inaad calaamadiso heerka saqafka oo aad calaamad u yeelato jihada marka la sameynayo daaqada;
caleemaha la gooyey dhererka saqafka oo leh kaalmo 8-10 cm;
ugu wanaagsan inaad isku dhejiso;
Ku dheji xariijinta adoo rooga ama isbuunyo. Ka saar sharoobada xad-dhaafka leh maro;
Si aad u samaysato gees qurux badan, marka hore u calaamadee meesha ay derbiyadu kulmaan. Kadibna si tartiib ah u kala soocida dharbaaxada oo jarjar dhejis ah.
Mararka qaarkood waxaa lagama maarmaan ah in la soo qaado sawir, kadibna bilowdo shaqo.
Waxaad isticmaali kartaa laba hab oo xulasho ah:
isticmaal laba duub. Ka jar xargaha duubka ugu horeeya, ku faafi dhulka (si deg deg ah ayaad ugu dhejin kartaa derbiga), qaado liiska labaad iyo xulida xariiq cusub oo ka soo baxaya sawirka. Iska yaree oo hadda dooro qaabka ku qoran liiska hore;
isticmaal hal liis. Iska yaree xariiqda ugu horeysa, u wareegto duubka si aad isugu xirto qaabka kuuskuuban. Iska yaree safka labaad oo ku celi habka. Faa'iido la'aanta habkan waa qadar badan oo qashin ah, waxaa jiri kara qiyaastii 1.5 m oo caleen ah.
Sida loo saaro xumbo
Haddii hannaanka isdifaacidda uu dhibsado, waxaa dhici karta in xumbadu muuqdaan. Haddii xayawaanka aan weli la qalajin, markaa xayawaankaas waxaa laga saari karaa iyadoo si taxadar leh loo dhajiyo aagga dhibaatada leh qalab ama buraash. Inkastoo ay qoyan yihiin, shubanku waa lama huraan - way baaba'ayaan marka qalajinta, marka xadhiguhu "fadhiisto". Haddii xumbada aan la waayin oo ku hadhsan wallpaper qalalan, ka dibna waxaad u baahan tahay inaad sii wadato sida soo socota. Barar yar ayaa laga saaraa siringaha caafimaadka. Si tartiib ah u duujiso xumbada, soo jiid hawada. Ka dibna booska ayaa sidoo kale si fiican u buuxsamaya laalaabka oo la siman yahay, xabagta xad-dhaafka ah ayaa laga saaraa roog.
Xumbo waaweyn waa dhibaato weyn. Xaaladaha noocaas ah, jeexitaan ayaa lagu sameeyaa qaybta hoose iyadoo leh af gariif ah oo hawadu waxaa lagu tirtiraa xargaha ama buraashka.
Mar labaad, buuxi daloolka adigoo isticmaalaya sharooto leh sirinjin, kadibna hoos u siman oo tirtir jeex-ka-qaadashada xad-dhaafka ah. Laakiin xaaladdan, boogaha ayaa laga yaabaa inay ka muuqdaan goobta qalliinka, sidaa daraadeed waxaan kugula talinaynaa in aad marka hore ku fuliso hawlgalkan oo ah meel aan qarsooneyn.
Waxa la sameeyo haddii dusha laga saaro waraaqda
Maqnaanshaha u dhexeeya jilibka ayaa soo muuqda marka qaladaadka diyaarinta shaqada - derbiga aan la daboolin, wallpaper waa mid qoyan, ama haddii xaaladaha qalajinta la jabiyo. Tani waa dhibaato aad u daran, iyo haddii ay dhacdo baaxad weyn, meelahaas waa in dib loo habeeyo.
Ma taqaanaa? Markii ugu horeysay ee Yurub ah, waraaqda muraayadda ayaa lagu sameeyay duub qoraaga Hugo Goyce. Waxay dhacdey 1509 gudaha York. Kumbuyuutarka ayaa abuuray muraayad madow iyo caddaan ah. Hadda qaybo ka mid ah duubkan ayaa lagu kaydiyaa matxafka Cambridge. Iyo bixiyaha ugu weyn ee waraaqda xayawaanka ilaa qarnigii XIX ahaa Shiinaha, halkaas oo loo adeegsaday tan iyo qarnigii II.
Xaaladaha khafiifka ah, waxaad sameyn kartaa waxyaabahan soo socda:
loogu talagalay rinjiga loogu talagalay rinjiga waa midka ugu fudud ee la sameeyo. Waxay ku filan tahay in la xiro nabarada oo ay hoos u dhacaan oo ay ku hoos qulqulayaan jilicsanaanta, ka dibna wax kasta oo la rinjiyeeyo. Ha isticmaalin mooska halkii aad shaabadayn lahayd, sababtoo ah waxay u egtahay in ay jabto oo u burburto;
Xirmooyinka waraaqaha ayaa lagu ridi karaa biyo waxayna sugaan inay bararaan. Kadibna waxaad u baahan tahay inaad si tartiib ah u adkeyso oo aad u baxdo 5 daqiiqo, ka dibna daloolo PVA-ga oo u kala-goy-goyso adoo rooga.
Haddii aysan taasi dhicin, markaa waxay sii ahaaneysaa in lagu qurxiyo xayawaanka ama ku daboolan bacda qashinka ee isla taagta.
Sida loo xiro warqadda gogoldhaafka ah ee la jeexay
Waraaqda derbiga oo ku salaysan warqad ka dib marka la isticmaalo koolada waa in la duubaa. Halkan waa sida loo sameeyo si sax ah. Muuqaal ahaan u kala qaybi qaybta sadex qaybood, iskudubka sare qeybta, sedexda qaybood ee hoose ayaa sidoo kale isku laab qaybta. Sidaa daraadeed, ma nala wadaagno kor iyo hoos. Waxay soo baxdaa qiyaastii waxaad aragtay sawirka hoose.
Xayawaanka dusha sare ee geedka
Markaad ku dhejiso xayawaanka ku yaala geesaha waa lagama maarmaan in la sameeyo jarjaran. Tani waxaa lagu sameeyaa mindi fiiqan, lafdhabarta iyo xargaha xargaha. Iyadoo gacan ka heleysa xariijinta tuubooyinka ayaa la sameeyaa, kaas oo la sameyn doono manjooyin.
Spatula si taxadar leh ugu riix xuubka derbiga si aad u gooyo mindhicirka. Xaaladdan, waxaan u dhaqaaqnaa oo kaliya maaddada spatula, mindi ayaa lagu cadaadiyay - sidan ayaad ku gaari kartaa khadad goynta ah.
Qalabka saqafka oo ku dhaji meelaha basaboorka
Dhamaan tani waxaa sidoo kale lagu sameeyaa spatula iyo mindi fiiqan. Spatula waxaa lagu daboolayaa dhab ahaan geeska. Kadibna mindi ayaan ku dhejineynaa lakabka oo jar jaraha waraaqaha xad-dhaafka ah. Qalabka daawada ka qaad oo ku celi habka.
Sida loo xoqdo waraaqaha gidaarka ballaaran
Nidaamka lagu shaqeynayo waraaqaha ballaadhan ee ballaaran ma aha wax ka duwan nidaamka caadiga ah. Natiijadu waxay noqon kartaa marka la dhammeeyo geesaha iyo meelaha kale ee adag. Si arrintan loo sameeyo, waxaa lagama maarmaan ah in la diyaariyo qaabab yar oo kabadan.
Sida loola dhaqmo inta lagu jiro qalajinta waraaqda
Sidaa darteed, waxaad horay u dhamaysay shaqada oo dhan iyo dhajisay gabaladii ugu dambaysay. Shaqada la qabtay. Hadda waxay ku jirtaa inay sugto qalajinta. Waqtiga qalajinta ayaa saameyn ku yeelan kara shuruudaha sida maaddada daboolida derbiga, nooca iyo cufnaanta xabagta, nooca derbiga ah.
Celcelis ahaan, dhammaan noocyada sawiradda qallalan ee maalinlaha ah, iyadoo la raacayo qoyaanka caadiga ah, heerkulku aanu ka yareynin + 17 ... +20 ° S iyo maqnaanshaha qoraalada. Ma aha wax qiimo leh oo isbeddel ah oo isbeddel ah (tusaale, kor u qaadista heerkulka ama hoos u dhigista qoyaanka), maxaa yeelay waxay saameyn xun ku yeelanaysaa daboolka - waraaqda ayaa xajmi doona, xajmiga iyo xayawaanka ayaa tagi doona.
Taas ka reeban waxay noqon kartaa waraaqo adag oo cufan (biro, dhuxul) - waxaad la shaqeyn kartaa iyaga ka dib 48 saacadood, laakiin qalajinta buuxda ayaa iman doonta hal toddobaad.
Sida loo dhajiyo waraaqaha derbiga ah
Boorsooyinka waxay noqdeen qayb ka mid ah qurxinta qolalka casriga ah. Sidaa darteed, waxay sidoo kale ay inta badan leeyihiin in ay dhajiyaan wallpaper.
Sababtoo ah isweydaarsiyada masraxa, muhiim ma aha in la doorto xayawaanka leh qaab - waa wax aan suurtagal ahayn in lagu gaaro khilaaf buuxa. Waxaa lagama maarmaan ah in la siiyo doorbid qaab-dhismeed yar ama waraaq muuqda. Waxaa fiican in aad isticmaasho qalabka jilicsan ee cufan oo dheeraad ah - sidaa daraadeed dhuubanaha ayaa si adag u taageeraya kaynta.
Tallaabada tallaabo waxay u egtahay sidan:
marka la dhejiyo derbiga intiisa kale, xisaabi si ay u sii jirto 25-30 cm oo ah meel bannaan oo aan la gashanayn oo ku taal geeska kore. Meelahaas ku sii daa koolada iyo ka tag oo rusheeyaan 10-15 daqiiqo;
inta lagu jiro wakhtigan diyaarinta dhuuban;
ku dheji qalabka dhererka gidaarka oo jarjar meesha qiiqa leh adigoo ah 2-3 cm;
gooyaa geesaha sida waafaqsan geeska dillaacsan leh ee kudhow 3 cm .Ku xir fartaada iyo koolladaada godka;
Ku celi taxanaha dhinaca kale ee kore.
Waxaan sugeynaa qalajinta oo u sii gudbi isdaba-marinta qorraxda:
Ugu horreyn, waxaan diyaarinnaa cirifka dhererka yar ee ka hooseeya qaanta qorraxda - 3-4 mm;
waxaan ku dhejineynaa derbiga iyo xargaha, u sug xaashida derbiga si ay u bararaan oo ku dhajiyaan hoosta;
xayeysiisyada waa inaysan noqon mid aad u dheer. Dhaqdhaqaaqa ugu fiicani waa dhexda qorraxda;
marka hore waxaan ku dhejineynaa hal dhinac, ka dibna dhinaca kale;
waxaan ku biiri karnaa bartamaha.
Ka dib qalajinta, godka ayaa diyaar u ah qurxinta dheeraad ah.
Sida loo dhejiyo xayawaanka, haddii ay xayiraan
Wax kastoo u muuqda in la dhammeeyo, wax walba waa la sameeyay, laakiin markii qalajinta ama waxoogaa ka dib waxaad ogaataa in qaar ka mid ah waraaqaha sawirku ay soo baxeen. Waa fiicantahay haddii kali-kali-kali-kali-kali-kali-habsamida ay dib-u-dhigaan. Laakiin waxay dhacdaa in qaybo badani soo baxaan. Gaar ahaan inta badan waxay taasi ku dhacdaa guryo hore, halkaas oo derbiyada ay ku cad yihiin lime.
Sidaas awgeed, haddii ay go'doomintu yar tahay:
Diyaarso koolada, samee wax yar oo khafiif ah inta lagu guda jiro shaqooyinka ugu muhiimsan, ama isticmaal jajab diyaar ah;
dib u soo celi cidhifyada iyo wallpaper nadiif ah iyo derbi ka soo jeeda qashin qub ah;
Ku dhaji oo sug ilaa inta derbiga iyo waraaqda derbiga la qooyay;
si adag u cadaadis, laakiin waa inaad gashaa aagga dillaacsan adigoo rinjiga xargaha;
Ha abuurin qorshooyin illaa dusha sare u qalalan.
Qayb weyn ayaa loo qaabeeyey sida soo socota:
nadiifinta derbiga iyo xargaha dharka darbiyada qashinka;
koollada ugu horeysay ee ciribtirka oo ka baxo si ay u bararaan 7-10 daqiiqadood;
ka dibna gawaarida derbiga. Hubi in koolladu aysan ku dhicin dhinaca hore ee waraaqda derbiga;
Si taxadar leh ugu dheji faashadda derbiga kuna dhaji. Aad u taxaddar markaad toosinayso;
riixo rikoodh, raajo ama buraash.
Sida aad arki karto, geedi-socodka derbashadu maaha mid gaar ah. Waa ku filan si fiican u diyaargaroobida, soo saaro dhamaan qalabyada lagama maarmaanka ah oo si taxadar leh u raac tilmaamaha soo saaraha iyo taladeena.